Tantera-drano chipboard - China Weifang Ranomasina Joy Trade
Board sombiny no be mpampiasa ny fanaka sy ny ravaka anatiny. Miaraka tsara fananana, toy ny hoe mora fabricability, hiondrika avo hery, fahaizana mihazona mafy visy, hafanana mahatohitra, manohitra ny voasakantsakan'ny, fahari-maharitra ary tsy misy vanim-potoana vokany.
Product Name tantera-drano Chipboard -Plain chipboard, Melamine niatrika na Veneer Manoloana Chipboard
Size 1220mm * 2440mm (4'x8 ') na namboarina habeny.
hateviny Tolerance <+ - 0.2mm
Face / Back tsotra, melamine taratasy na veneer
toy ny hoe: Maple, sapele, kesika, lavenona, paoma, beech, serizy, teak, noix, wenge, oaka, kapa, sns
toy ny hoe: fotsy, volondavenona, manga, maitso, mainty , mena, voasary, mavokely, mavo, sns
Veneer karazana Birch, rotra, lavenona, sapele, noix, teak, oaka, Maple, beech, serizy, mena lilia, ect.
Veneer Grade A, AA na AAA
Niatrika Type Single-miatrika, Double-niatrika
Core Material Maro tamin'ny hazo popola hazo, hazo kesika na nafangaro poti
lakaoly MR, WBP, Melamine Glue
Grade Kilasy voalohany
hakitroky 680 ~ 730kg / m3
hamandoana Content 5% -10%
Formaldehyde émission Fitsipika E0 / E1 / F2
Usage & Performance Board sombiny no be mpampiasa ny fanaka sy ny ravaka anatiny. Miaraka tsara fananana, toy ny hoe mora fabricability, hiondrika avo hery, fahaizana mihazona mafy visy, hafanana mahatohitra, manohitra ny voasakantsakan'ny, fahari-maharitra ary tsy misy vanim-potoana vokany.
fonosana Standard Export Pallet fonosana - haingana kokoa sy azo antoka kokoa ny nampiditra azy any, amin'ny vidiny tsy asa fiampangana, fa tsy be tamin'izany andro izany.
Mahamenatra fonosana - Mety nampiditra bebe kokoa dia be ny sambo ihany, fa lafo kokoa ny asa mba hampidiran'izy fiampangana azy izy.
Supply Fahaizana 20000 metatra toratelo / volana
Payment Terms 30% T / T petra-bola alohan'ny famokarana sy fifandanjana manohitra dika mitovy ny B / LL / C.
Ora nanomezana Tao anatin'ny 15 andro aorian'ny fandraisana petra-bola na ny tany am-boalohany L / C amin'ny fahitana
Certification ISO9001: 2000, taona, CARB, FSC, P2
Betsaka ampiharina eo amin'ny ny fanaka. Kitchen cabinets, Office birao, tontonana haingokaingony, fisakafoana milentika, ao varavarana.
1. Ataovy Furniture
Furniture mividy afaka mampiasa isan-karazany sy ny voajanahary milled fiberboard hazo. Toy izany koa no fijery ho tanteraka amin'ny fototra sombiny birao sy ny orinasa maro mahazatra fanaka efa lehibe
fahombiazana mampiasa azy io ho toy ny fitaovana fototra.
Ny vahaolana tsara indrindra dia ny mampiasa sombiny birao tranga sy ny hazo tena tarehiny. Izany miteraka Somary lafo governemanta sy manao sombiny biraom-malaza vokatra ao amin'ny orinasa.
Ny toerana malaza indrindra ho an'ny accents manodidina varavarankely, varavarana, gorodona sy ny valin-drihana ao amin'ny endriky ny Karakarao tsara sy ny koronosy. Ireo fitaovana natao mora kokoa izy ireo, rehefa noforonina avy sombiny board. Sombiny board dia
mora ny hametraka ary na dia mora kokoa hanoratanao.
Sombiny birao dia tsy tokony ampiasaina ho toy ny lehibe indrindra Flooring, fa matetika ampiasaina mba handrakotra hardwood gorodona izay efa teo ihany ny trano.
1) Avo hiondrika hery
2) kely Linear fanitarana coefficient
3) Strong fantsika Nihazonako
4) hamandoana porofo sy ny asa mora
5) henjam-fanorenana sy hery avo
6) Tsy misy ratten na simba
7) Low formaldehyde émission
7.Provide maimaim-poana ho an'ny mpanjifa fitaovana dokambarotra 'famantarana fanontam-pirinty sy ny fisondrotana.
Previous: Veneer niatrika Chipboard